Flan sôkôla tsy misy-mofo, tsindrin-tsakafo tena tsotra hatao. | Recipe ao an-dakozia
Montse Morote | 10/06/2021 09:00 | episeria fy, Postres
Flan Chocolate tsy misy lafaoro, tsindrin-tsakafo tsotra sy manankarena indrindra ho an'ireo tia sôkôla, mahafinaritra. Vonona amina singa vitsivitsy izy ary tena tsara.
El Ny flan nentim-paharazana dia voaomana ao anaty lafaoro ao anaty bain-marie, ity dia tsotra kokoa. Izy io koa dia azo atao tsy misy atody ary omena jelly, curd na toy ity nomaniko ity.
El flan sôkôla no tsindrin-tsakafo mety indrindra ho an'ny ankizy ary tena manankarena, azonao atao ny mampiasa sôkôla ronono na sôkôla mainty, azonao atao ny mametraka caramel ranoka, na dia tsy nasiako aza.
Vovoka kakaô 4 sotro fihinanana
Lafarinina katsaka 4 sotro fihinanana (Cornstarch)
125 gr. ny siramamy
Mba hanomanana ny flan sôkôla tsy misy lafaoro, dia asio vilany ao anaty afo miaraka amin'ny ¾ ampahany amin'ny ronono iray litatra, ampio ny siramamy. Hikorontana isika, hanana hafanana antonony isika. Hatsipintsika ao anaty lovia ny sisa amin'ny ronono.
Hataontsika ao anaty vilia ny yolks izay misy ny ronono, afangaro ary afangaro. Ao anatin'io vilia io ihany no hampidirantsika ny lafarinina katsaka 4 sotro. Afangaro, afangaro mandra-pahafatin'ny zava-drehetra izahay.
Ao anaty vilany misy antsika ao anaty afo, dia ampianay tsikelikely ilay vovoka kakaô, hosokafinay mandra-pahafatin'ny zava-drehetra.
Rehefa rava ny sôkôla dia ampio ny vilia izay misy ny ronono, miaraka amin'ny atody sy ny katsaka, amin'ny vilany.
Afangaroy daholo ny zava-drehetra mandra-pahatonga azy ho matevina, rehefa matevina dia esorinay ary fenoy vera sôkôla ny vera vitsivitsy. Avelantsika ho tezitra izy ireo ary mametraka azy ireo ao anaty vata fampangatsiahana.
Manompo izahay !!!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: firosoana » namany » episeria fy » Flan sôkôla tsy manendy
hace Andro 2
Tsy flan io fa tena crème mofomamy sôkôla, manankarena fa tsy flan !!